Ukunakekela umzimba ngokomzimba ekhaya
Ebusika, ukunakekela isikhumba sobuso, sivame ukukhohlwa ngokunakekelwa komzimba. Ngokufika kwentwasahlobo, sithatha izinyawo zethu ezithombeni ezibuhle, ama-gyms, sithenga izindlela ezehlukene zokunakekela umzimba, ngokujwayelekile, siqala ukulungiselela inkathi yasebhishi. Sizibandakanya ngokuzikhandla ngokwethu ukuze umzimba wethu ubonakale ukhulu kakhulu kune-Angelina Jolie. Ungakwazi ukunakekela umzimba wakho ekhaya. Kodwa kuphi ukuqala ukunakekelwa kochwepheshe komzimba ekhaya?
Kungcono ukuqala ngamanzi okugeza noma i-sauna. Ukuvakashelwa okumbalwa nje - kanti ama-pores azohlanzwa, futhi isikhumba sizobe sibhebhezela futhi siphumelele. Futhi uma kugeziwe ukwenza umzimba ogcwele umzimba noma ukuzithokozisa, umphumela uyoba mnandi kokubili umphefumulo nomzimba. Kodwa lokhu kuphunga akudingeki kwenziwe ngokuqondile egumbini lomusi. Kungcono ukukwenza ngokushesha ngemva kokushiya ngenkathi umzimba usafudumala. Udinga ukusikhipha indawo yezintambo, amathanga kanye namathole, kuyilapho kudingeka badonswe, baxoxwe futhi bahlolwe. Ukuqeda ukusikhipha umzimba kufanele kube ukushayeka. Lapha ungaphakathi kwe-sauna noma i-sauna, unombukiso omuhle kakhulu, manje ungase uqale ukwenza ngokuphumelelayo ubhekene noju nosawoti olwandle. Abantu abambalwa kakhulu bayazi, kodwa uju izinyosi zingakwazi ukuthola izinto ezinobuthi esikhumbeni bese ziwondla, futhi usawoti uphinde ufeze izinhlayiyana ezikhishwa ngobisi. Ngemuva kokubheka okunjalo, ungasho ngokusobala ukuthi uzizwa sengathi uzalwa kabusha. Phela, isikhumba siqala ukuphefumula, siba bushelelezi njengesilika bese sikhanya ngobuhle nobusha.
Ekhaya, ungasusa futhi i-cellulite. Ngemuva kwalokho, yilokho okukhathazayo owesifazane ngaphambi kokuqala kwesikhathi sezinyoni. Yiqiniso, i-cellulite ayiyona isifo, kodwa ukulwa nalo sekuqhubeka iminyaka eminingi. Abesifazane bahlukumezeka kakhulu naye, kodwa ngeshwa ngeke akwazi ukunqotshwa kanye nhlobo. Kodwa ukuze sikwenze ukuze ukubonakaliswa kwayo kunciphise, singakwazi, kusemandleni ethu.
Ukwenza isikhumba sethu ezinkingeni ezinjalo njengezintambo nezintambo zilula, kudingeka sikwenze ukusikhipha umzimba, ukufaka, ukukhipha, nokusebenzisa imikhiqizo emelene ne-cellulite. Cishe imishini yokulwa nobuhlungu be-anti-cellulite ekhaya kungenzeka, kufanele yenziwe njalo ngosuku. Ungayenza ngokushaya, uhla, ubungle, njll. Futhi ungayenza ngokusebenzisa imbiza yamacilisi, ngoba lokhu kufanele sisebenzise amafutha esikhumbeni sokusikhipha bese uvumela le nto ibambe. Ngaphezu kwalokho, imbiza ye-silicone iyasuswa, okungukuthi, ngaphandle kokukhipha isikhumba ukwenza izinyathelo eziyindilinga, ukuxubha izindawo eziyinkinga.
Futhi ukuhlunga okufanayo kwe-anti-cellulite kufanele kwenziwe okungenani imizuzu eyishumi, kuze kube yilapho isikhumba singapheli. Ngemuva kokubutheka, kunconywa ukugibela ngaphansi kwengubo imizuzu engamashumi amabili ukuze ugcine ukushisa. Kodwa kukhona ukuphikisana okungahle kube khona ukusikhipha imithi - i-varicose veins, izifo zegazi kanye nezifo ezithathelwanayo. Inkambo yokwelashwa naloluhlobo lokunakekelwa komzimba, njengokusikhipha ngokumelene nes cellulite, yizinqubo ezingu-8-10, ezingaphindwa emva kokuphumula kweviki ezimbili.
Ekunakekelweni okuhle komzimba ekhaya, indawo ekhethekile inganikezwa ukucubungula. Ngesikhathi sehlobo lesikhathi sasebhangi kunconywa ukuba wenze lokhu kuhlunga cishe izikhathi ezimbili noma kathathu ngesonto. Kudingeka kwenziwe ngokusetshenziswa kwezimonyo ezikhethekile, okwenziwe ngamakhemikhali futhi uzokwenza. Amakhambi asekhaya asebenza kahle kakhulu ekuhloliseni angacatshangwa njengamahhavini asekhofi omhlaba kanye nosawoti olwandle. Ikhofi eliphansi kufanele lengezwe ukhilimu omuncu noma uju, bese-ke, ukugcoba umzimba, uphonsa esikhumbeni. Musa ngokushesha ngemuva kokuba inqubo igijimise ebhodini bese uyigeza emzimbeni wakho. Vumela lesi simiso esimangalisayo singene esikhumbeni sakho futhi sigcwalise ngezinto eziwusizo. Ngesizo salokhu ukunakekelwa kwesikhumba emzimbeni wakho, uqeda izinhlayiya ezifile, uhlanze kahle isikhumba, wenze kube lula kakhulu futhi kube mnene. Ikhofi engaphezulu ingabhebhezela isikhumba bese ikulahla i-cellulite.
Ukubhekwa ngetyuwa usawoti kwenziwa ngale ndlela: uthathe usawoti bese uwagcoba, bese usihliza ngobumnene, uhlasele isikhumba. Ngemuva kokuphela kwenkambiso, sihlanza usawoti, bese sisebenzisa ubisi olululisayo esikhumbeni.
Ukunakekela umzimba ekhaya kungenza futhi ukugoqa. I-Wraps kufanele yenziwe uma ufuna ukukwenza isikhumba sakho sithande kakhulu. Ngaphandle kosizo lwabachwepheshe, akulula kakhulu ukukwenza. Ukuze wenze lokhu, udinga ukusebenzisa esikhumbeni ikhambi elikhethekile, ongayenza futhi, futhi ugobe isikhumba ngefilimu, futhi ngaphezu kwalo kufanele ufake ama-shorts noma ama-breeches wokufudumala nokulungisa. Lena inqubo enhle kangaka, engadingi ukuba wenze noma yimuphi umzamo. Ngalesi sikhathi ungakwazi ukugibela ngaphansi kwengubo nasesimweni esilalile ukubuka i-TV noma ukwenza into efanele. Futhi emva kwehora uhamba eshaweni bese ugeza konke kuwe futhi usebenzise ubisi olunomsoco noma olunomsoco emzimbeni.
Futhi ungalungisa kanjani le-agent yokugqoka? Nazi izindlela ezimbalwa:
1. Hlanganisa ikhofi yomhlabathi uju kanye namaconsi ambalwa wamafutha abalulekile e-orange.
2. Thatha ubisi anti-cellulite emzimbeni bese ufaka amaconsi ambalwa e-citrus olixube.
3. Sidlulisa ubumba oluhlaza okwesibhakabhaka ngamanzi esimweni esibucayi, engeza amafutha abalulekile e-citrus kanye nekhofi encane yomhlabathi.
Manje, isikhumba sakho sihlanzekile futhi sinezandla futhi wenza konke okuthandayo, ngaphandle kosizo lwachwepheshe ababizayo nezinqubo zabo, kodwa nje ngokuchitha umzimba wakho ukunakekelwa ekhaya. Futhi besingakwazi kakade ukuya esikhwameni, kodwa sivele sikhohlwe ngamabhande, amadolo nezintethe ezibukeka zingekho. Akuzona bushelelezi futhi buthambile. Ukubhekana nenkinga yesikhumba esinamahloni emadolweni nasezindlebeni, ungasebenzisa izindlela zokunciphisa isikhumba esinzima - ilamula. Kumelwe nje unqume isikhumba selamula nge-alpine encane futhi uyisebenzise isigamu sehora esikhumbeni emagqumeni nasemadolweni, emva kwalokho udinga ukuwufaka ngento ethile. Ngemuva kwemizuzu engu-30, ususa i-lemon uphinde ugcobe isikhumba ngekhilimu. Le nqubo kufanele iphindwe izikhathi ezimbalwa.
Ukunakekelwa komzimba ngokomzimba kusho nokunakekela izithende zakho, okuyinto enzima ukuyisebenzisa ekhaya. Kodwa ukuze uzikhandle, udinga ukusebenzisa le nqubo: shayela izinyawo zakho emanzini ashisayo, khona-ke kudingeka udonsa izinyawo zakho nge-pumice noma usike ngesihlungi. Khona-ke sebenzisa kakade ngezinyawo ezomile ukhilimu, uhlanganise ifilimu, futhi phezu kwakho ubeka amasokisi. Le compress kufanele igcinwe ihora, emva kwalokho udinga ukugeza izinyawo zakho emanzini afudumele.
Izimfihlo zobuhle zabesifazane
Indlela yokwenza isisu esiswini, amathiphu asebenzayo
Ungathola kanjani isisu esiswini?
Kungani izipikili ezinemilenze ziqhekekile: kanjani ukubhekana nale nkinga?
Isisu somzimba: izivivinyo eziphumelelayo
Ama-mufini nge-sinamoni ne-coffee icing
Ija nge-orange nesinamoni, iresiphi ngesithombe
Rosey Huntington-Whiteley - inkanyezi ephakanyiswayo yaseHollywood
Inkukhu yegwayi yendabuko. Ukupheka kwezinkukhu ezilosiwe
Ama-postcard amahle kakhulu nezithombe ku-Palm Sunday 2018 ngezibingelelo nezifiso
Iresiphi yekhekhe "14 Carat"
Ubuhlobo phakathi kwendoda nowesifazane eJapane
Shayela isivumelwano, ukwelashwa ngezindlela zomuntu
Umlobokazi ophelele - ukulungela umshado
I-Appetizers yetafula lokugubha, zokupheka
UmkaSergey Svetlakov uyinhlanhla ebaluleke kunazo zonke ekuphileni komculi (izithombe ezingavamile zomndeni)
Thembela emndenini: izimiso ezinhlanu zokuxhumana
Ukuphothula iziqu enkulisa